Lesi sihloko ngeke ukhulume omunye ngentuthuko yakamuva "Cordiant" inkampani Russian. Isebenza thembeke cishe kuzo zonke izimo zezulu, ngaleyo ndlela wathola kusuka abashayeli kanye nezifundiswa izibuyekezo kakhulu. Cordiant Winter-Drive ine quin ohlangothini yimpandla iphethini.
Le ngxenye elingaphandle amabhlogo yimpandla we motion lwakha longitudinal ukuqinisa izimbambo futhi unesibopho ukuzinza imoto. Ingxenye kwangaphakathi kahle kususa amanzi neqhwa udaka kusuka endaweni contact.
iraba Soft, okuvumela isondo ukuhlala bakwazi ukubhekana nokuhlupheka esikhathini yesithwathwa olunzima. Ngesikhathi esifanayo izingxenye organosilicon ukunikeza Cordiant Winter-Drive PW 1 ukuqina okusezingeni eliphezulu. Lokhu kunciphisa ukungqubuzana ugingqe okunomthelela ugqugquzela umnotho.
Lapho amathayi ekuthuthukiseni wasebenzisa ubuchwepheshe computer ukumodeliswa 3D mod. Kungenzeka ukuba sifinyelele umthwalo umfaniswano isidumbu isondo futhi sandise patch ukuxhumana komgwaqo. Ngebanga lalokho, lokhu kuyasiza ukwandisa ukuphila we traction isondo-no-ihlolwe ezindaweni ezishelelayo.
Ukusebenzisa inhlanganisela izingqimba metal intambo ezakhiwe futhi inayiloni wave ekhethekile evumela ukufeza ukumelana puncturing futhi sekulinganisa ezinhle amathayi. A eziklanyelwe amazombe sipe amafomu ahlinzeke okuthembekile imoto traction eqhweni futhi ohlangene iqhwa uqweqwe.
Ubuciko ungqimba double Double Nyathela iraba ingxube akavunyelwe ukwenza isendlalelo ezithambile engenhla yimpandla, okuyinto ebalulekile ukungqubuzana isondo. Futhi ngaphansi yimpandla ungqimba kwangaphakathi wenziwe ngohlobo baqinisa, okwenza isondo onensika Cordiant Winter-Drive futhi kukhulisa ukuphila kwabo inkonzo.
Ikakhulukazi ukusetshenziswa kwezindlela zobuchwepheshe obuphambili yimpandla design. Isicelo SAS (Smart Asymmetric System) ukuvumele ukunciphisa ibanga unyathela amabhuleki at izimo zezulu ezihlukahlukene. Ngenxa yalesi inkomba, isondo okudlula eziningi ebusika amathayi Velcro izimbangi. Futhi isakhiwo quin kusiza kahle yimpandla ukususwa umswakama iqhwa indawo ukuxhumana komgwaqo, okwandisa ukuzinza kanye nokuphathwa.
Lobunikazi iraba kwakwakhe SMART-MIX® ihlangana lisetshenziswe ukukhiqizwa kwe-carbon omnyama futhi Silica. Lokhu kunciphisa ukungqubuzana kweqa futhi ngcono isondo oxhumana naye endleleni ezimanzi noma oshelelayo. ukuthuthukiswa Isicelo kwaholela ukwandisa traction ku iqhwa ku qweqwe eqandisiwe 7%.
Model Cordiant Winter Drive, ukuhlolwa wenziwa "Ngemuva isondo" umagazini e Northern Sweden, ngokushesha wabonisa ukusebenza high. Futhi ngokusho kwezinye izici, ngisho uvelile ngaphambi onobuhle efanayo abakhiqizi adumile emhlabeni amathayi.
Le modeli isondo possesses izinzuzo ezilandelayo ukusebenza:
ukushayela eqondile futhi ulwazi. Uthole ngokusebenzisa amabhlogo omkhulu we yimpandla ehlombe futhi isikhungo ingxenye isondo oxhumene. Bakha ezintathu longitudinal eqinisa izimbambo okuyinto banesibopho ukuzinza imoto.
anemifantu ejulile longitudinal futhi transverse. Dala i-ngempumelelo amanzi ohlelweni, okuvumela ukuba khona uketshezi kule contact incane. Ukuphathwa umgwaqo encibilikisiwe kuba ukhululekile futhi ephephile.
Umcibisholo emise yimpandla amabhlogo Ingcenye ephakathi futhi endaweni enamandla ehlombe. Ungavumeli isondo agxumele eqhweni esithambile futhi ahlinzeke traction ezinhle ezindaweni ezishelelayo.
Okuphansi umsindo uma ushayela nophethiloli umnotho. Uthole ngezithukuthuku ibalwa kukhompyutha quin yimpandla design amabhlogo. Okokhelekayo umnotho ukunikeza Silicon okufakiwe lichaza ekwakheni iraba, ekunciphiseni ukungqubuzana phakathi komgwaqo futhi sishintshe isondo.
Yokusheshisa izinhlobo ezahlukene umgandayo
Njengoba nokubuyekezwa, Cordiant Winter-Drive kuchuma ngaphansi ezihlukahlukene izimo zezulu kusuka iqhwa iphalishi ekuqaleni uma kuncibilika iqhwa ebusika noma kuze ezineqhwa band e abafileyo ebusika. izimfanelo Versatility traction kufezwa ngokusebenzisa inhlanganisela enkulu nabanolaka yimpandla block ezithambile iraba Ukwakheka nge lamellae z emise ukuhlinzeka ukusheshisa ku ice neqhwa ohlangene.
Amabhulokhi yimpandla ehlombe ngeziteshi ezijulile uvumele imoto ukusheshisa ngaphandle slippage in snow ejulile ngenkathi ngokweqile yayo kahle zisuswe ngaphandle. On elula ezomile kwamasondo emgwaqweni futhi sinikeze ukusheshisa okuhle, ihlukanisa kubo kusukela onobuhle igcwele.
Braking ezimweni umgwaqo ahlukahlukene
Lapho braking eqhweni ngomshikisho amathayi kancane kunabayeni 'abafowabo' abengeziwe igcwele. Kodwa izenzakalo zamuva cishe negate umehluko. Noma kunjalo, kufanele ngaphansi unyathela amabhuleki ibanga iqhwa okuxekethile asphalt, okubenza babe ezihlukahlukene.
Ukuze izakhamuzi of emadolobheni amakhulu zisebenzisa amathayi okunamathelayo ngaphezulu okungcono, ebusika abazi ngokuvamile hamba endleleni. Imigwaqo ezindaweni ezisemadolobheni amakhulu akuvamile embozwe iqhwa ngenxa ukusetshenziswa amakhemikhali Izinsiza amasevisi ngokumelene nopende ocwebezelayo. Ngakho-ke, ngobuningi babo izimoto ebusika ukuhambisa e lalihlale likhithikile, kwa- okusanhlamvu, asphalt ezomile noma ezimanzi. Ukuze izakhamuzi of ezifundazweni eziseningizimu ye-Russia zisebenzisa ukungqubuzana amathayi kuyinto ebaluleke kakhulu.
ukuzinza Lateral. Noise induduzo ngenkathi ushayela
Kukhulumisana kahle nesive Uhlaka isakhiwo, izimbambo longitudinal emincane amabhlogo ehlombe ukunikeza controllability kakhulu ngesikhathi cornering emigwaqeni ebusika. slats Multiple, isakazwe ikhompyutha ku amabhlogo we yimpandla, zizenza ukuba zizinze lateral phakathi izingxenye ndima endleleni ezineqhwa.
amathayi Soft futhi akukho spikes ukunikeza ezingeni ezinhle wenduduzo acoustic uma ushayela imoto zihambisana ngala mathayi. I ngomnikelo omncane futhi wethula azilingani yimpandla design ukuthi kunciphisa kunomsindo kunyakaza. Leli lungiselelo mutual amabhlogo yimpandla abalingisa yokuthi lapho ezihambayo, zingekho resonance futhi ukukhiqiza umsindo ngokuphawulekayo esingaphansi ithayi kanye nephethini lesinesitfombe-sibuko.
Umumo Cordiant Winter-Drive PW 1 kuhlanganisa 16 ububanzi osayizi kusuka 13 kuya 16 ne Inkomba 72T umthwalo (580 kg) ukuze 102T (850kg)
Njengoba kubonakala kahle ububanzi idatha Winter amathayi zenzelwe ukufakwa ku anhlobonhlobo izimoto zokukhiqiza ezifuywayo angaphandle. Babuye esetshenziselwa ukufakwa kwi crossovers Russian angaphandle, SUV kanye ububanzi we amasondo-16 amasentimitha.
Izibuyekezo abanikazi imoto
Imodeli siqhutshwa iminyaka engaba mibili futhi wathola Izibuyekezo ezinhle abanikazi imoto. Cordiant Winter-Drive ubhekana izimo indlela enzima ezingxenyeni ezihlukahlukene zezwe. Abathengi kubuyekezwa yabo iphuzu ukuzinza amabhasi idatha imoto ezahlukene zokucabanga. Ikakhulukazi kugcizelelwe yizinhlobonhlobo zabo, traction okusezingeni eliphezulu izakhiwo asphalt, ezimanzi, iqhwa. Ngenxa nomklamo walo futhi izinga yokukhiqiza, isondo ezilinganiswe ngokuphelele, okungadingi abayiqapheli abanikazi imoto.
Njengoba nokubuyekezwa, Cordiant Winter-Drive ezazidingeka futhi ethandwa phakathi abashayeli Russian. Abaningi ukucindezeleka ayenayo Velcro ne amathayi igcwele, ngoba Ukugibela ebusika ikakhulukazi edolobheni. Kulokhu bonke abathengi lokuqala uthenge Cordiant Winter-Drive isondo. Izibuyekezo uqinisekise iziphetho uchwepheshe ukuthi lokhu imodeli akuyona kuphela hhayi eliphansi kuya angaphandle analogue, kodwa ngokuvamile idlula nabo.
Ngisho nalabo ngaphambili bexhashazwa amathaya ukukhiqizwa Korean futhi Japanese, shiya okubuyayo. Cordiant Winter-Drive, ngokuvumelana kubo, laba kanjani nesandla handling esihle futhi abe enokwethenjelwa traction izici. Abantu abaningi efana nezimo zabo eziphakemeyo nokushintsha izimo zezulu, enikeza ithemba lapho ushayela the nobusika. Abashayeli ukugcizelela induduzo acoustic, okuyinto abazizwa ngokushintsha amathayi igcwele ku ukuhilizisana.
Amanani Cordiant Winter Drive eku-intanethi bese siphelelwa izikhungo
Njengoba ezitolo mobile bendabuko, ezikhethekile isondo izikhungo kanye ukuhweba Phansi Inthanethi ingatholakala ukudayiswa Cordiant Winter-Drive. Intengo ubukhulu ethandwa 175/65 R14 kuhluka ezitolo inthanethi kusuka 1750 kuya ruble 2200. ngoba ithayi. Esikhathini ngemoto isondo izikhungo izindleko lisetudlwana. Thenga ngala mathayi kungaba njengoba low ngo-1990 kuya 2750 ruble. yileyo naleyo ingamashekeli.
Kumele kukhunjulwe ukuthi, nakuba amanani maphakathi isondo ngenhla, kodwa lokhu isaphulelo sina ukufakwa amasevisi noma kucatshangwa nhlobo khulula. Ngakho-ke, izindleko ingqikithi ukuthenga futhi ukufakwa esitolo nge isevisi imoto yangasese kungaba ushibhile kuka ukuthenga iraba ku-intanethi.
Inhliziyo ukuhlinzwa dlula semithambo: izinkomba nezindlela kokusebenza
Kuphi ukuthola imali khulula? We uzokutshela!